अभिनेत्री तथा सांसद किरण खेरलाई ब्लड क्यान्सर! - Hamro Filmy News
सलमान खानको फिल्म ‘राधेः योर मोस्ट वान्टेड भाई’ मे १३ मा प्रदर्शन हुने
filmy news - March 16, 2021 0
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको फिल्म ‘राधेः योर मोस्ट वान्टेड भाई’ मे १३ मा प्रदर्शन हुने भएको छ । सलमानले दर्शकहरुलाई वाचा गरेअनुसार राधे फिल्मको...
filmy news - April 5, 2021 0
नेपाली चलचित्र प्रेम गीत’ भारतमा रिलिज गरिने भएको छ । अभिनेता प्रदीप खड्का र क्रिस्टिना गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको यस फिल्म भारतमा रिलिज गर्ने तयारी...
filmy news - March 10, 2021 0
चलचित्र 'ए मेरो हजुर ४' को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । चलचित्रका निर्माता सुनिल कुमार थापाका अनुसार यही भदौ १८ गतेबाट चलचित्र प्रदर्शनमा...
filmy news - February 26, 2021 0
चर्चित अभिनेता पल शाहले चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुण प्रधान लगायतले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन् । धरानको ज्वाइ खाना घरमा खाना...
filmy news - February 20, 2021 0
नेपाली चलचित्र 'तिम्रो मेरो साथको' छायांकन केही दिन अघि मात्र सम्पन्न भयो। यतिबेला फिल्मकी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह छायांकनताका खिचिएका केहि तस्विरहरुलाई आफ्नो सामाजिक...
गायिका इन्दिरा जोशी २ बर्षदेखि प्रेममा रहेको खुलेको छ । इन्दिरा आफैले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै २ बर्षदेखि आफू प्रेममा रहेको खुलाएकी छिन् । ...
filmy news - April 6, 2021 0
भारतमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिरहेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको भारतमा बलिउडका कलाकारमा पनि संक्रमण देखिएको छ । यस्तै बलिउड अभिनेत्री...
बलिउडका चर्चित कलाकार अक्षय कुमार अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। बलिउड चलचित्र रामसेतुका ४६ कलाकारमा कारोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । अभिनेता अक्षय कुमारसहित...
filmy news - April 2, 2021 0
बलिउड अभिनेत्री तथा भारतीय जनता पार्टीको चन्डीगढकी सांसद किरण खेरलाई 'ब्लड क्यान्सर' भएको छ। किरण खेरलाई मल्टिपल साइलोमा भएको खुलासा भएको हो। यो एक...
बलीउड अभिनेत्री आलिया भट्ट कोरोना संक्रमित भएकी छन् । उनका प्रेमी रणबीर कपूर कोरोना संक्रमित भएपछि आलियाको कोरोना रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको हो । आलियाको...
filmy news - March 29, 2021 0
भारतको मुम्बाईमा ६६ औँ फिल्मफेयर अवार्ड सम्पन भएको छ । यस अवार्डमा बलिउडका स्वर्गीय अभिनेता इरफान खानलाई मरणोत्तर दुईवटा अवार्ड प्रदान गरिएको छ । अंग्रेजी...
filmy news - March 27, 2021 0
शर्मिला राई। नेश्नल ईन्टरटेन्मेण्ट अवार्ड प्राप्त गीत "माया पलायो" सार्वजनिक गरिएको छ । लोक-पप गीत अन्तर्गत बेस्ट लिरिक्स अवार्ड हात पार्न सफल उक्त गीत...
filmy news - March 20, 2021 0
गायक भक्त प्रधान र लोकप्रिय गायिका रचना रिमालको स्वर रहेको ‘ओई मेरो परान’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ।गायिका रचना रिमाल र गायक भक्त प्रधानको...
यसबर्षको नीम अवार्ड प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रचना गरेको स्वदेशमा रोजगारी स्वदेशमा बास बोलको गीतलाई...
चर्चित नायिक करिश्मा मानन्धर कलेज भर्ना भएकी छिन् । नायिका करिश्मा आजभोलि नियमित कलेज जान थालेकी छन्। प्लु टु पढ्दै गरेकी नायिका मानन्धर बिहानी...
filmy news - March 12, 2021 0
यसअघि नै लोकप्रिय बनिसकेको ‘रेलको बाटो’को अफिसियल भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कलाकार चिरञ्जीबी सापकोटाको मुख्य अभिनय रहेको गीत हिजो बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो।कर्णाली प्रदेशको विकट...
filmy news - December 19, 2020 0
हरेक मानिसको चाहना हुन्छ कि जीवनमा सजिलो जागिर पाइयोस् र तलब पनि मनग्गे होस् । तर सबैलाई सोँचेजस्तो जागिर कहाँ मिल्छ र ? जसोतसो...
Filmy News - November 5, 2020 0
मसाज सेन्टरमा मसाज गराउन पुगेका एक युवकले मसाज मात्र गराउने भन्दै यौन सम्बन्धका लागि अस्वीकार गरेपछि गम्भीर परिणाम भोग्नु परेको छ । युवकलाई २...
Filmy News - September 5, 2020 0
के तपाइले कहिले याद गर्नुभएको छ रु तपाइले राम्ररी नदेखेको कुरा क्यामरामा स्पष्ट खिचिएको पनि हुन् सक्छ । हामीलाई कहिलेकाँही लाग्छ यस्तो तस्बिर किन...
हाम्रो देश प्राचिन कालदेखि नै अन्धविश्वास र आडम्बरीले जबडिएको छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि मानिसहरु सामाजिक अन्धविश्वासमा नै अल्झिरहेका छन् । आफ्नो भविष्य...
Filmy News - July 5, 2020 0
काम गरेपछि तलबको माग सबैले गर्छन् । तर भारतको जोधपुरस्थित एक रेष्ट्रेन्टमा काम गरे बापत तलब माग्दा एक युवकलाई ठूलै समस्या आइपर्‍यो । रेष्टुरेन्टमा काम...
filmy news - April 9, 2021 0
कलाकार तथा गायक मदनकृष्ण श्रेष्ठ र अफ्रिकन गायिका वियोन्से फ्यामासीले एकसाथ गीत गाउने भएका छन्। मदनकृष्णले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफू र वियोन्सेले युगल गीत...
filmy news - March 25, 2021 0
नेपाली लोकदोहोरीको उनन्यन र प्रवर्द्धन गर्न भन्दै नेपाल टेलिभिजन मार्फत सुरु भएको कार्यक्रम 'दोहोरी च्याम्पियन' भने विवादमा तानिएको छ। पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं पहिलो...
भुवन केसीले माइतिघर २ बनाउने – अनमोल केसी नायक, नायिका को?
निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो नेपाली फिल्म 'माइतीघर'को थिममा अर्को फिल्म बन्ने भएको छ। भुवन केसीले छोरा अनमोललाई लिएर 'माइतिघर २' बनाउन लागेका हुन्। भुवनकै...
कलाकारहरुको फेसबुक आइडी ह्याक गर्ने १४ वर्षीय किशोर पक्राउ
कलाकारहरुको फेसबुक आइडी ह्याक गर्ने १४ वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोको टोलीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कसूर...
बलिउड अभिनेत्री तथा भारतीय जनता पार्टीको चन्डीगढकी सांसद किरण खेरलाई ‘ब्लड क्यान्सर’ भएको छ। किरण खेरलाई मल्टिपल साइलोमा भएको खुलासा भएको हो। यो एक किसिमको ब्लड क्यान्सर हो । अहिले किरणको मुम्बइमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।
किरण खेरका मित्र तथा भाजपा चण्डीगढका सदस्य अरुण सूदले विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर किरणको स्वास्थ्यबारे खुलासा गरेका हुन् । उनका अनुसार किरण २०२० देखि नै यो समस्याको उपचार गराइरहेकी छिन् । किरण खेर बलिउड अभिनेता अनुपम खेरकी पत्नी हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा सूदले भने ‘गएको नोभेम्बर ११ मा उहाँको हात चण्डीगढको घरमा हुँदा फ्र्याक्चर भएको थियो । चण्डीगढको पोस्ट ग्रयाजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिसर्च मा उपचारको क्रममा यहाँमा मल्टिपल साइलोमाको सुरुवाती पक्षण पाइयो । यो समस्या बायाँ हातबाट दायाँ काँधसम्म फैलिएको थियो । ४ डिसेम्बरमा एयरलिफ्ट गरेर उहाँलाई उपचारको लागि मुम्बइ ल्याइयो । त्यसपछि उहाँको उपचार भइरहेको छ ।’
किरणले १९८३मा रिलिज भएको पंजाबी फिल्म ‘आसरा प्यार दा’ फिल्मी दुनियाँमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनको बलिउडमा पहिलो फिल्म ‘पेस्तोंजी’ (१९८८) हो। उनले हिन्दी फिल्म ‘सरदारी बेगम'(१९९६)बाट पहिलो पटक नेशनल (स्पेशल जूरी) फिल्म अवार्ड प्राप्त गरेकी थिइन्। बंगला फिल्म ‘बारीवाली/द लेडी अफ द हाउस’ (१९९९)बाट उनले दोस्रो नेशनल अवार्ड जीतेकी थिइन्। उनको देवदास’ (२००२), ‘वीर जारा’ (२००४), ‘ओम शान्ति ओम’ (२००७) ‘खूबसूरत’ (२०१४) जस्ता फिल्म सुपरहिट छन्।
जय किशन बस्नेतकाे ‘हिरो नं. १’युट्युबमा सार्वजनिक(हेर्नुहाेस् पुरा चलचित्र)
के फुर्ति लाउनु समाज भनेर, यहाँ मानवता नै छैन : नायिका केकी अधिकारी
साङ्लो र सेल्फी किङबीच प्रतिस्पर्धा (भिडियाेसहित)